လက်ရှိ အချိန် ယူနိုက်တက် အတွက် အသင့်တော်ဆုံး နည်းပြ က ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားတဲ့ #ဘန်နီမက္ကာသီ | Football Myanmar
လက်ရှိ အချိန် ယူနိုက်တက် အတွက် အသင့်တော်ဆုံး နည်းပြ က ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားတဲ့ #ဘန်နီမက္ကာသီ
November 19, 2018 Adam Willian	12 Comments
2018 – 19 ရာသီ ဟာ ယူနိုက်တက် နည်းပြ ဟိုဆေး မော်ရင်ဟို အတွက် အစမ်းသပ် ခံ ရတဲ့ ကာလ ဖြစ်ပြီး ပေါ်တို မှာ တုန်း က ပေါ်တူဂီ သား နဲ့ အတူ လက်တွဲ အလုပ် လုပ်ခဲ့ ဖူးတဲ့ ဘန်နီ မက္ကာသီ က လက်ရှိ အချိန် မှာ သရဲနီ တို့ အတွက် ဟိုဆေး သာ အသင့်တော် ဆုံး နည်းပြ ဖြစ်တယ် လို့ ထောက်ခံ စကား ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် မှာ တော့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် အချို့ ဟာ မော်ရင်ဟို ရဲ့ နေရာ ကို အခြား ထိပ်တန်း နည်းပြ တစ်ဦး နဲ့ အစားထုိုး လို ကြ ပေမဲ့ မက္ကာသီ က ယူနိုက်တက် အနေ နဲ့ လက်ရှိ အချိန် မှာ ဟုိုဆေး ထက် ပိုကောင်း တဲ့ နည်းပြ တစ်ဦး ရှာဖွေ ရရှိ နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး လို့ အခိုင်အမာ ပြောကြား သွားလိုက် ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် ပရီးမီးယား လိဂ် ပွဲစဉ် 12 ပွဲ ကစား အပြီး မှာ ယူနိုက်တက် ဟာ အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့် 8 နေရာ မှာ သာ ရှိနေ ပြီး ထိပ်ဆုံး နေရာ က မန်စီးတီး အသင်း အောက် 12 မှတ် အကွာ ၊ နံပါတ် လေး နေရာ က တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး အောက်7မှတ် အကွာ မှာ ရှိနေ ပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် ရလဒ် တွေ အပေါ် မကျေမနပ် ဖြစ်နေ ကြတဲ့ ယူနိုက်တက် ပရိသတ် အချို့ က နည်းပြ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေ လို နေ ကြပြီး အခြား ထိပ်တန်း နည်းပြ တစ်ဦးကို မျှော်လင့် နေကြ တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
လက်ရှိ နည်းပြ မော်ရင်ဟို က တော့ ယခင် ကတည်းက ပရီးမီးယား လိဂ် မှာ သူ့ရဲ့ အစွမ်းအစ တွေ ကို ပြသ ထား ခဲ့သူ ဖြစ် ပြီး ချဲလ်ဆီး နဲ့ အတူ အမှတ်ပေး ဖလား သုံးကြိမ် အထိ ဆွတ်ခူး ပြထား နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ ဂန္ဓဝင် နည်းပြ ဆာ အဲလပ်စ် ဖာဂူဆန် မရှိ တော့တဲ့ နောက် အပြောင်းအလဲ ကာလ အတွင်း ရလဒ် မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေ ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်း ကို မော်ရင်ဟို ကိုင်တွယ် ခွင့် ရရှိ ထားခဲ့ တာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဒါပေမဲ့ မော်ရင်ဟို အိုးလ် ထရပ်ဖို့ ကို ရောက်ရှိ လာခဲ့ တာ သုံး ရာသီ ရှိ ခဲ့ပြီ ဖြစ် ပေမဲ့ ယူနိုက်တက် ဟာ သိသိသာသာ တိုးတက် ကောင်းမွန် လာ ခဲ့ခြင်း မရှိ သေးတဲ့ အတွက် ဝေဖန် မှု တွေ များပြား နေ ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ မက္ကာသီ က တော့ မော်ရင်ဟို လို ပုဂ္ဂိလ် ရဲ့ နေရာ မှာ အစား ထိုးဖို့ အတွက် သိသာ ကောင်းမွန် တဲ့ နည်းပြ ရှိ မနေ ဘူး လို့ ယုံကြည်ကြောင်း ဖွင့်ဟ သွားလိုက် ပါတယ် ။
” တစ်ခါတရံ ခင်ဗျား တို့ ဘဝ မှာ တစ်ကယ့် ကို ဆိုးရွား လှတဲ့ အခိုက် အတန့် တွေ ပိုင်ဆိုင် ရလေ့ ရှိတက် ပါတယ် ။ အခု လည်း မော်ရင်ဟို က အဲ့ဒီ လို အချိန် မျိုး ပိုင်ဆိုင် နေတာ ပါ ။ ဟိုဆေး ဟာ အကောင်းဆုံး ပုံစံ နဲ့ ပြန်လာ လိမ့်မယ် ဆိုတာ 100 ရာခိုင်နှုန်း သေချာ ပါတယ် ”
” ယူနိုက်တက် အနေ နဲ့ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး နည်းပြ တစ်ဦး ကို လွယ်လင့် တကူ မထုတ်ပယ် သင့်ဘူး လို့ ကျွန်တော် ထင် ပါတယ် ။ ထုတ်ပယ် မယ် ဆိုရင် ရော ဘယ်သူ နဲ့ အစား ထိုး မလဲ ? ခင်ဗျား တို့ ခေါ်လို့ ရနိုင် မဲ့ အထဲ မှာ ဟိုဆေး ထက် ပို ကောင်းတဲ့ နည်းပြ မရှိ ဘူး လုိ့ ကျွန်တော် ထင် ပါတယ် ”
” သူ့ ရဲ့ ပင်ကိုယ် စရိုက် နဲ့ သွင်ပြင် လက္ခဏာ တွေ က သူ ဟာ ဒါတွေ ကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်း နိုင်တယ် ဆိုတာ သိသာ ထင်ရှား လှ ပါတယ် ။ ကျွန်တော် အတွက် တော့ သူဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အတွက် အကောင်းဆုံး ၊ အသင့် တော်ဆုံး နည်းပြ ပါပဲ ”
” သူ့ အနေ နဲ့ အချိန် တွေ ဟာ ပြောင်းလဲ လာခဲ့ပြီ ဆိုတာ သိရှိ နားလည် ဖို့ လိုအပ် ပါတယ် ။ သူ့ အနေနဲ့ ကစားသမား တွေရဲ့ အတ္တ ၊ မာန တွေကို အနည်း နဲ့ အများ သိရှိ နားလည် ရ ပါ့မယ် ။ လူငယ် ကစားသမား တွေ ဆိုတာ ချစ်ခင် မှု ၊ ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက် မှု တွေကို အလို ရှိတက် ကြ ပါတယ် ”
” ဒါပေမဲ့ သူ ကတော့ ကစားသမား တွေ ရဲ့ အတ္တ မာန တွေ ကို သိပ်ပြီး နားလည် ပေးချင် တဲ့ သူ မျိုး မဟုတ် ပါဘူး ။ သူ ယုံကြည် တာ က ကစားသမား တွေ ကွင်းထဲ ရောက်ပြီ ဆိုတာ နဲ့ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ဆန်ဆန် ကစား ဖို့ ၊ တက်စွမ်း သမျှ ပေးဆပ် ကြဖို့ ပါပဲ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆို တော့ ဒီ ကစားသမား တွေ က အဲ့ဒီ လို လုပ် ပြဖို့ အတွက် ထိုက်တန် တဲ့ လစာငွေ အများကြီး ရရှိ ထားကြ လို ပါပဲ ။ ကွင်း ထဲမှာ အကောင်းဆုံး ခြေစွမ်း တွေ ပြသ ဖို့ ဆိုတာ သူတို့ ရဲ့ တာဝန် ပဲလေ ။ မော်ရင်ဟို က အလုပ် ကို အဲ့ဒီ လိုပဲ လုပ်ချင် တဲ့ သူ မျိုး ပါ ” လို့ မက္ကာသီ က မော်ရင်ဟို ရဲ့ အလုပ် အပေါ် ထား ရှိတဲ့ အတွေး အခေါ် ၊ အယူအဆ တွေ ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
Previous Postအင်္ဂလန်ကို (၂-၁) ဂိုးနဲ့ ရှုံးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ခရိုအေးရှားနည်းပြ ဒါလစ်ရဲ့ ပွဲပြီးမှတ်ချက်စကားNext Postယခုနှစ် ချယ်လ်ဆီး အသင်း ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက် ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် ချန်ပီယံ ဖြစ်ဖို့ အတွက်သာ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟ ခဲ့တဲ့ #ဒရော့ဘာ
12 thoughts on “လက်ရှိ အချိန် ယူနိုက်တက် အတွက် အသင့်တော်ဆုံး နည်းပြ က ဘယ်သူလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားတဲ့ #ဘန်နီမက္ကာသီ”
edwardhpnk.x.fc2.com Teasing Panty Lesbians Cameltoe.
I simply had to say thanks yet again. I’m not certain the things I would’ve carried out in the absence of the actual secrets provided by you about such industry. It had beenavery distressing crisis in my circumstances, but consideringaspecialized avenue you managed the issue forced me to jump for joy. I am happier for the information and then pray you find out whatagreat job that you are doing educating some other people thru your web site. Most probably you haven’t encountered any of us.
You actually make it appear really easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and very large for me. I’m havingalook ahead in your next put up, I’ll try to get the cling of it!
order cialis in us says: